I-Buzz, Viral noma iZwi Lokumaketha Ngomlomo: Uyini umehluko? | Martech Zone
ULwesibili, April 14, 2015 NgoMsombuluko, Ephreli 13, 2015 Douglas Karr
UDave Balter, umsunguli we I-BzzAgent, Wenza umsebenzi omuhle ekuchazeni umehluko ku- I-Buzz, Viral kanye ne-Word of Mouth Marketing kulolu hlobo lwe-ChangeThis. Nazi izingcaphuno ezinezincazelo ezinhle zikaDave:
Liyini iZwi Lokumaketha Ngomlomo?
Izwi lokukhangisa komlomo (WOMM) iyindlela enamandla kunazo zonke emhlabeni. Ukwabelana kwangempela kombono ngomkhiqizo noma insizakalo phakathi kwabathengi ababili noma ngaphezulu. Kwenzekani lapho abantu baba ngabameli bemikhiqizo yemvelo. Kuyigrafu engcwele yabakhangisi, ama-CEO nosomabhizinisi, njengoba ingenza noma iphula umkhiqizo. Isihluthulelo sempumelelo yayo: ukuthembeka futhi kungokwemvelo.
Ukuthengisa Ngegciwane kuwumzamo wokuletha umyalezo wokumaketha osakazeka ngokushesha nangokucacile phakathi kwabathengi. Namuhla, lokhu kuvame ukuza ngesimo somlayezo we-imeyili noma ividiyo. Ngokuphikisana nokwesaba kwama-alarmists, i-virus ayiyimbi. Akukhona ukungathembeki noma okungokwemvelo. Okungcono kakhulu, kunikwe amandla ngomlomo, futhi kokubi kakhulu, kungomunye nje umyalezo wokuthengisa ophazamisayo.
Kuyini ukumaketha kweBuzz?
Ukumaketha kweBuzz umcimbi noma umsebenzi odala ukwaziswa, injabulo, nolwazi kumthengi. Imvamisa kuyinto ehlanganisa umcimbi we-wacky, we-jaw-dropping noma isipiliyoni ngokubeka uphawu okumsulwa, njengokufaka i-tattoo ebunzini lakho (noma imbongolo yakho, njengeqembu lezempilo le-NYC elisanda kwenza). Uma i-buzz yenziwe kahle, abantu bazobhala ngayo, ngakho-ke iba yimoto enkulu ye-PR.
Nayi i-infographic ehlukile kwi-Word of Mouth Marketing (WOMM) evela eLithium:
Tags: ukumaketha kwe-buzzlithiumukumaketha kwamagciwaneOwesifazaneWOMMizwi lomlomoukumaketha kwamagama
UJun 17, 2008 ngo-9: 41 AM
Kimina ngicabanga ukuthi i-Word of Mouth iyindlela enhle kakhulu yokumaketha, kodwa futhi ngicabanga ukuthi ibuyela emuva kulokho abantu abakushoyo ngawe. Kungaba inkemba onqenqemeni oluphindwe kabili. Thatha imboni yama-movie ngokwesibonelo. Ngiya kumabhayisikobho lapho abangane bami bengitshela ukuthi bake bayibona ibhayisikobho futhi bayayithanda. Ehlangothini le-flip, lapho ngijabule nge-movie bese ngithola umbiko omubi ovela kumngane, ngenza okuphambene ngqo.
Ngicabanga ukuthi ngabe lokhu kuqonde phambili ngamabhulogi namawebhusayithi?